Taliyayaashii Nabadsugidda Iyo Booliska Xamarwayne Oo Xilalkii Laga Qaaday, iyo Askar La Xiray+ Akhriso Sababta – Hornafrik Media Network
Taliyayaashii Nabadsugidda Iyo Booliska Xamarwayne Oo Xilalkii Laga Qaaday, iyo Askar La Xiray+ Akhriso Sababta
Kadib markii Maanta jawaab laga sugayay Wasaarada amniga Soomaaliya taas oo ku saabsaneyd dilkii dhawaan degmada Xamarweyne loogu geestay Xoghayihii Ururka Haweenka Qaranka iyo Wiil ay dhashay Gudoomiyaha Ururkaasi ayuu Wasiirku ka warbixiyay wixii u qabsoomay iyo Talaabooyinka ay qaadeen.
Wasiirka Amniga Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Abuukar Islow ayaa soo bandhigay baaritaankii Saraakiisha Booliska ku hayeen dhacdadii Axadii la soo dhaafay ka dhacday degmada Xamar weyne, kaasoo kooxo watay gaari ay ku rasaaseeyeen gaari kale.
Wasiirka Amniga oo ka hadlayay Xarunta Jen. Kaahiye ayaa sheegay baaritaanka kiiskan ay iska kaashadeen Wasaaradda Amniga iyo Taliska Booliska, isagoo xusay in gacanta lagu dhigay nin looga shakisan yahay iyo gaarigii lagu fuliyay weerarkaas oo baaritaan lagu haayo.
“Waxaa la hayaa cadeymo furo u noqon kara kiiska, dib ayaa laga soo sheegi doonaa marka uu baaritaanka soo dhamaado, gaariga uu ninka watay baaritaan dheeraad ayaa ku socdo”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
“Taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugida ee degmada Xamar weyne xabsiga ayaa la dhigay, xilalkana waa laga qaaday, sidoo kale waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labo isgoys oo midna weerarka ka dhacay, midna ku dhowaa, waxaan ku raad-joognaa askar kale oo ku qorneyd labada Isgoys”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in tallaabo laga qaadi doono Taliyeyaasha iyo askartii dayacday shaqadii loo xil saaray ama ka gabaiyay waajibaadkooda.
“Waxaa baaritaanka kiiskan u xil saarnay Guddi ka tirsan Taliska Booliska, sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana lagu soo gabagabaynayaa, dambiilayaashana lagu horkeenayaa cadaalada, waxaa jiri doono isla xisaabtan iyo dabagal lagu hubin doono shaqada iyo howlaha ciidamada ammaanka, mana jiri doono mas’uul aan gudan waajibaadkiisa oo xil sii heyn doono”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Natiijada baaritaanka uu soo bandhigay Wasiirka Amniga ayaa noqonaya kiiskii ugu weynaa ee sida wadajir ah ay baaritaankooda uga qeyb qaataan Wasaaradda Amniga iyo Taliska Booliska, iyadoo tan iyo maalintii Khamiistii, markii uu Wasiirku soo saaray amarka, ay socdeen baaritaano aan kala go’ laheyn.
Dhacdadii todobaadkii hore ka dhacday degmada Xamar weyne ayaa su’aal badan iyo shaki kala duwan dhalisay, markii rag hubeysan oo gaari wadatay ay weerar ka geysteen Xamar weyne, iyadoo halka weerarka ka dhacay ay ka ag-dhowaayeen baro ciidamadu ku sugnaayeen.
HornAfrik ayaa Shalay soo bandhigtay Dad loo soo qabtay Dilkaasi oo uu ku jiro Askari Nabadsugidda ka tirsan oo ku eedaysan inuu isagu weeraray Gaariga Ururka Haweenka Qaranka.
Dhagayso Wasiirka Amniga Gudaha, Maxamad Islow Ducaale.
Xildhibaano Ka Tirsan Galmudug Oo Maxkamad Looga Yeeray.
Akhriso Galmudug Oo Xaalad Deg Deg Ah Lagu Soo Rogay.